Pakati Vagadziri & Suppliers - China Intermediate Factory
Inonyanya kushandiswa mumishonga yepakati uye biochemical reagents.Pakati pefosfomycin, inoshandiswawo sevulcanization accelerator, cosmetics (kirimu, lotion), mineral oil, parafini emulsifier, biological buffer, biological buffer Agent.
M-phthalaldehyde inoshandiswa mumishonga yepakati, fluorescent inopenya, nezvimwe.
1-methyl-4-acetylnaphthalene uye potassium dichromate yakasvibiswa kwe18h pa200-300 ℃ uye inenge 4MPa;1,4-dimethylnaphthalene inogonawo kuwanikwa ne liquid phase oxidation pa 120 ℃ uye inenge 3kpa ine cobalt manganese bromide se catalyst.
Adipic acid uye thionyl chloride zvakasanganiswa muyero yehuremu hwe1: (6-10) uye refluxed kwe20-60 h pamberi pepyridine catalyst.The solvent was evaporated and the sare was heat at 140-160 ℃ for 3-7 H. Thiophene-2,5-dicarboxylic acid yakawanikwa ne sodium hydroxide treatment, acid precipitation, filtration, decolorization uye kucheneswa.
Chengeta muimba yekuchengetera inotonhorera, yakaoma uye ine mhepo yakanaka.Ramba kure nemoto nekupisa.Iyo package inofanirwa kuvharwa uye isina hunyoro.Inofanira kuchengetwa zvakasiyana kubva kune oxidant, alkali uye makemikari anodyika, uye kusanganiswa kwekuchengetedza kunofanira kudziviswa.Midziyo yekudzimisa moto yemhando dzinoenderana uye huwandu huchapihwa.Imba yekuchengetera ichave yakashongedzerwa nekuvuza kwechimbichimbi michina yekurapa uye yakakodzera yekuchengetedza zvinhu.
Ichi chigadzirwa ndicho mbishi yekugadzira antioxidant 2,6-di-tert-butyl-p-cresol uye rabha antioxidant.Panguva imwecheteyo, zvakare yakakosha yakakosha mbichana yekugadzirwa kwemishonga TMP uye dhayi coricetin sulfonic acid.1. GB 2760-1996 rudzi rwezvinonhuwira zvinodyiwa zvinobvumirwa kushandiswa.
Chengetedzo yekufambisa: usati watakurwa, tarisa kana mudziyo wekurongedza wakwana uye wakavharwa, uye ona kuti mudziyo haubvire, kudonha, kudonha kana kukuvara panguva yekufambisa.Izvo zvinorambidzwa zvachose kusanganiswa neasidhi, oxidants, zvokudya uye zvokudya zvinowedzera.
Yakagadzirirwa necatalytic oxidation yep-xylene nemhepo.Kana iyo yemhepo yekumanikidza nzira inoshandiswa, xylene necobalt naphthenate inogona kuwedzerwa mupoto yekupindura, uye mweya unounzwa pakudziya kusvika 90 ℃.Kupisa kwekuita kunodzorwa pa110-115 ℃ kwemaawa angangoita makumi maviri nemana, uye inenge 5% yep-xylene inoshandurwa kuita p-methylbenzoic acid.
Pakati pepyrimethamine.Inoshandiswa mukugadzirwa kwep-chlorobenzyl doro;p-chlorobenzaldehyde;p-chlorobenzene acetonitrile, nezvimwewo.
P-tert-butylphenol ine antioxidant zvimiro uye inogona kushandiswa seyakagadzikana yerabha, sipo, chlorinated hydrocarbons uye faibha dzakagayiwa.UV absorbers, anti-cracking agents akadai semishonga yezvipembenene, rabha, pendi, etc. Somuenzaniso, inoshandiswa se stabilizer ye polycarbon resin, tert-butyl phenolic resin, epoxy resin, polyvinyl chloride, uye styrene.
2,4,6-Trimethylaniline inzvimbo yepakati inoshandiswa zvakanyanya mudhayi, mishonga yezvipembenene uye mamwe maindasitiri.Iyo mbishi yekugadzirwa kwe mesitidine ndeye mesitylene, inowanikwa mu petroleum.Nekuitika kwehukuru hwekugadzirwa kwemaindasitiri muChina, kuburitswa kwemesitylene kuri kuramba kuchiwedzera, saka kuvandudzwa kwezvigadzirwa zvayo zvepasi kwave kutariswa zvakanyanya.
Iyo kiyi yepakati yekugadzirwa kwebiphenyl bisphenylacetylene fluorescent whitening agent CBS-X uye CBS-127.Inogona zvakare kushandiswa semishonga kana resin yepakati.
© Copyright 20102021 : Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa.	Fluorescent Brightener SWN Optical Brightening Agents Ranipal WG Shandong Subang Optical Brightener 52 Subang Chemcial >